भारतीय राजनेताहरुको गोप्य प्रेम प्रसङ्ग : कसैको घरबार उजाडियो, कोही अविवाहित बसे
Friday, 1 Jun, 2018 9:17 AM
जब मामिला निजी जीवनको गोपनीयताको आउँछ तब भारतीय राजनीतिज्ञ संसारकै सबैभन्दा ठूला तानाशाहामा बदलिन्छन् । राजनेताहरुले एक अर्काको जति नै विरोध गरे पनि अरुको प्रेम प्रसंग, विवाहेत्तर सम्बन्ध तथा तथाकथित ‘दोस्रो महिला’ का बारेमा सार्वजनिक चर्चा नगर्ने एक खालको अघोषित सम्झौता भएजस्तो देखिन्छ ।
एक दुईवटा अपवादलाई छोडेर भारतीय राजनीतिज्ञले यो परम्परालाई निर्वाहा पनि गरेका छन् । यसको एउटा कारण हुन सक्छ हर कोही सिसाको घरमा बसेका छन् । तर ‘गर्भनेन्स नाउ’का सम्पादक अजय सिंह यसको पछाडि दोस्रो कारण मान्छन् । उनी भन्छन्,‘ सिसाको घरमा त विदेशीहरु पनि बस्छन् तर त्यहाँ पत्थर फ्याँकिन्छ । यहाँको एक सामन्ती अतीत छ जहाँ राजाहरुलाई केही चिजमा उनीहरुको विशेषाधिकार छ भन्ने सोचेर हामीहरु हिँडिरहेका छौं । उनी भन्छन्,‘ एक इटालियन शब्द छ ‘ओमार्टा’ जसको अर्थ हो अपराधिहरुमा एक गुप्त सम्झौता हुन्छ । जसमा म तपाईंको बारेमा केही बताउँदिन र मेरो बारेमा पनि तपाईंले पनि केही नबोल्नुहोस । भारतीय राजनीति पनि अलि–अलि ओमार्टा जस्तै छ । केही मामिलामा यति धेरै मौनता छ जुन कुरामा नहुनु पर्दथ्यो ।
मिडिया र राजनीतिज्ञहरुको बीच उनको निजी जीन्दगीलाई लिएर एक खालको सामाजिक सम्झौता भएजस्तो देखिन्छ । एक हदभन्दा पर सार्वजनिक चर्चा या बहस हुने छैन । भ्रस्टाचार, धोखाधडी, भाइ–भतिजावादको मुद्दामा आममानिस र मिडिया निकै नृशंस छन् तर निजी जीवनका तथाकथित ‘स्केंडल्स’लाई मिडियाले नजरअंदान गर्छ ।
टाइम्स अफ इन्डियाका पूर्वसम्पादक इंदर मल्होत्रा भन्छन्,‘ आज संसारमा हरेक चिज खुला छ । सोशल मिडिया पनि छ । तर, त्यतिबेला नेताहरुको निजी जीवनको बारेमा अखबारहरुमा कत्ति पनि छापिन्नथ्यो । रेडियो र टेलिभिजन सरकारकै थिए’
उनी भन्छन्,‘ अब पंडित नेहरुलाई नै लिउँ न, तमाम देशमा उनको लेडी माउंटबेटनसँग सम्बन्ध छ भनेर चर्चा हुन्थ्यो । अर्की एक शारदा माता थिइन । जसको बारेमा जिउँदो र मरेपछि पनि चर्चा भइरह्यो । उनको मृत्युपछि उनको बारेमा किताब पनि छापियो । उनीभन्दा पहिले गान्धीको बारेमा पनि, जसले कुनै पनि चिज लुकाउँदैनथे । उनको एक अनुयायीले किताब लेखे कि उनी आफ्नो ब्रम्हचर्यको प्रयोगको दौरान आफ्नो दुबैतर्फ युवतीहरुलाई सुताउँथे । ’
इंदर मल्होत्रा यो पनि भन्छन्, कि साठीको दशकमा गान्धीको सेक्स र ब्रम्हचर्यको प्रयोगमा निर्मल कुमार बोसको किताब छापिनुभन्दा पहिला यसको बारेमा मान्छेहरुलाई शायद थाहा पनि थिएन । यसभन्दा पहिले यो विषयमा लेख्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो ।
जवाहरलाल नेहरुको एडविना माउंटबेटनसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि विदेशमा निकै चर्चा भयो । इंदर भन्छन्,‘ यस बिषयमा इंगल्यान्डमा एउटा किताब छापियो । माउंटबेटन ट्रस्टले यो किताब छाप्न बकायदा इजाजत दियो । नेहरुले जति पनि पत्र एडविनालाई लेखेका थिए, त्यससलाई त्यो किताबमा शामेल गरियो । उनी भन्छन्,‘माउंटबेटनको जीवनीमा पनि नेहरुको एडविनाका साथ रोमांसको जिकिर गरिएको छ । तर, जब जेनेट मोर्गनले एडविनउपर किताब लेखिन तब उनले एडविनाले नेहरुलाई लेखेको पत्र छाप्ने कोशिस गरिन त्यतिखेर ती पत्रहरुलाई छाप्न उनलाई अनुमति मिलेन ।
इंदिरा–फिरोजको वैवाहिक जीवन
इंदिरा गान्धीको वैवाहिक जीवनमा पनि सार्वजनिक रुपले बहुत कम भनिएको छ । केवल, उनको आफ्नो पति फिरोज गांन्धीसँग सम्बन्ध राम्रो थिएन भन्नु बाहेक । इंदर मल्होत्राले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने,‘ फिरोज गान्धी मेरा अनौठा साथी थिए । उनकोमा जुन महिला आउने गर्थिन उनीले मलाई पनि चिन्थिन् । उनको दोस्ती हम्मी नामकी एक निकै राम्री महिलासँग थियो । उनको बाबु उत्तर प्रदेशको सरकारमा मन्त्री हुने गर्दथे । इंदिरा नेहरुको रेखदेख गर्न बच्चाहरुलाई लिएर दिल्लीमा प्रधानमन्त्री निवासमा बस्न थालिन । त्यहीबाट फिरोजको रोमान्स सुरु भयो । फिरोज हैड अ काइंड अफ ग्लैड आई । ’
हम्मीलाई लिएर इंदिरा गान्धीको जीन्दगीभर गुनासो रह्यो । यसबारे इंदर मल्होत्राले भने,‘ ‘जब फिरोज जिउँदो थिएनन् त्यतिखेर इंदिरा गान्ध्ी प्रधानमन्त्री बनिन् । इन्दीरा गान्धीले संकटकाल लगाउनुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हम्मी कुनै एउटा विषमा निवेदन दिन आइन । त्यतिखेर उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्कन लागेकी थिइन । त्यहिबेला काँग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुवा अफिसमा प्रवेश गरिरहेका थिए । इंदिरा गान्धीले बरुआसँग भनिन्, बाहिर हेर त । जुन महिलालाई तिमीले देखिरहेको छैै, यसको लागि फिरोजले मेरो सारा जीन्दगी खराब गरदियो ।
राजीव–सोनियाको प्रेम कहानी
राजीव गान्धी र सोनिया गान्धीको प्रेम प्रसंगका बारेमा पनि राष्ट्रिय मिडियामा बहुत कम चर्चा भएको छ । राशिद किदवईले सोनिया गान्धीको बारेमा लेखेको जीवनीमा यस मुद्दामा आफ्नो नजर जरुर दौडाएका छन् । किदवईले बीबीसीसँग भने,‘ सुरुमा सोनिया गान्धीलाई यो पनि थाहा थिएन कि राजीव गान्धी जवाहरलाल नेहरुका सन्तान हुन । उनी पहिलोपटक केम्ब्रिजको एक ग्रीक रेस्टुरेन्ट‘वरसिटी’मा भेटिएका थिए । उनी आफ्नो एक साथीसँग बसेकी थिइन । राजीव गान्धी पनि आफ्नो साथीसँग थिए । ’
किदवाई भन्छन्,‘ सोनिया गान्धीले स्वयम आँफैले भनेकी छन् कि जुन नजरले राजीवले उनलाई हेरे.....पहिलो हेराइमा नै उनीसँग प्रेम भयो । अनि, राजीव गान्धीले उनलाई एक कविता लेखेर पठाए । सोनिया गान्धीलाई त्यो कविता साह्रै मन पर्यो । यसपछि दुबै जनाको भेटधाट हुन थाल्यो । एक पटक इंदिरा गान्धी ब्रिटेन यात्रामा गइन । त्यहाँको अखबारमा उनको तस्वीर छापिए अनि उनलाई थोरै डरको महशुस भयो । ’ किदवईले भने,‘ एकपटक उनी आधा बाटोबाटै फर्केर आइन । इंदिरासँग भेट गर्न उनले हिम्मत जुटाउन सकिनन् । जब सोनियाले पहिलोपटक भेट गरिन त्यतिखेर उनले फ्रेंच भाषामा कुरा गरिन । किनकी इंदिरालाई फ्रेन्च आउँथ्यो । सोनियालाई अंग्रेजीमा बोल्न अफ्ठेरो लाग्थ्यो । पछि जब सोनियाका बुबालाई उनले राजीवसँग विवाह गर्न गइरहेकी छन् भन्ने थाहा भयो त्यतिबेला बुबाले यसको विरोध गरे । जब राजीव विवाहको प्रस्ताव लिएर सोनियको बाबुसामु पुगे उनले मैले तिमीहरुबीच कत्तिको प्रेम छ भनेर जाँच्न चाहन्छु भने । बाबुले उनीहरुलाई एक बर्ष एकदोस्रोसँग नभेट्न भने । एक बर्षपछि सोनिया गान्धीले फेरी विवाहको पहल गरिन । फेरी पनि उनका बाबु विवाहका लागि तयार भएनन् । सोनिया र राजीवको विवाहमा उनले खासै गुनासो पनि गरेनन् । ’
राजीवका कान्छा भाइ संजय गान्धीको नाम पनि कयौ महिलाहरुसँग जोडियो । ती मध्येकी एक रुख्साना सुल्ताना पनि थिइन । राशिद किदवाई भन्छन्,‘ रुख्साना सुल्तान कुनै ठूलो पब्लिक फिगर थिइनन । तर त्यो सम्बन्धलाई संजयले अघि बढाए । उनको जुन लाइफस्टायल थियो, त्यो जमानामा मेकअप गरेर हाई हिल्स लगाएर बाहिर निक्लिन्थिन । उनको एक ‘डोमिनेटर क्यारेक्टर’ थियो । काँग्रेसका कयौ मान्छेहरु भन्छन, उनले संजयसँग आफ्नो हक जमाउँथिन । र यो एक यस्तो हक थियो जसलाई सम्बन्धको नाम दिइएन । संजयको अनेक केटीहरुसँग उठबस थियो । जतिखेर संजयको मेनका गान्धीसँग विवाह हुने निश्चित हुँदै धेरै मान्छेले यो कसरी सम्भव भयो भनेर आश्चर्यता प्रकट गरेका थिए । कयौ केटीहरुको चित्त दुखेको थियो ।
वाजपेई–राजकुमारी कौल प्रकरण
पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेईको परिवारलाई लिएर केही खराव टिप्पणी भएकै हुन तर यसले उनको लोकप्रियतामा बिल्कुल फरक परेन । वाजपेईले कलेज पढ्ने बेला आफ्नो साथी राजकुमारी कौलसँग विवाह त गरेनन् तर उनको विवाह पछि उनी उनकै पतिको घरमा बस्न थाले । सैवी पत्रिकालाई दिएको अन्तवार्तामा श्रीमति कौलले भनेकि छन्,‘ मैले र अटल विहारी बाजपेईले यो सम्बन्धको बारेमा कुनै सफाइ दिनुपर्ने जरुरत नै ठानेनौं ।
श्रीमति कौलको केही समयअघि निधन भयो तर राष्ट्रिय मिडियामा उनको यो सम्बन्धको बारेमा कुनै चर्चा भएन । किनकी यी दुईको सम्बन्धका बारेमा मान्छेहरुलाई केही थाहा थिएन । बीबीसीले श्रीमती राजकुमारी कौलकी साथी तलत जमीरसँग कुराकानी गर्यो ।
तलत भन्छिन्,‘ उनी साँच्चिकै निकै राम्री कश्मिरी महिला थिइन... निकै ओजनदार । साह्रै राम्रो बोल्थिन । उनले बोल्ने उर्दू भाषा निकै मिठो थियो । जब म उनीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास जान्थे त्यहाँ मान्छे उनलाई माता भन्थे । अटलजीको खानपानको सबै जिम्मेवारी उनकै थियो । भान्सेहरु आएर उनलाई सोध्थे, आजको खानमा के–के बनाउने । उनलाई टेलिभिजन हेर्ने साह्रै शोख थियो । टेलिभिजनमा आउने सिरियलको बारेमा कुराकानी गर्थिन । उनी भन्थिन, प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर जब जन्मिए त्यतिबेला उनी अख्तरलाई हेर्न अस्पताल गएकी थिइन । अख्तरका बाबु जानिसार अख्तर ग्वालिएरको भिक्टोरिया कलेजमा उनलाई पढाउने गर्थे । उनी जावेदसँग निरन्तर सम्पर्कमा पनि रहने गर्थिन ।
मुलायमको दोस्रो विवाह
मुलायम सिंह यादवको दोस्रो विहेको बारेमा पनि मानिसहरुलाई निकै पछि मात्र थाहा भयो । जव मुलायमले अकूत सम्पत्ति जम्मा गरेको आरोपमा सुप्रिम कोर्टमा एक बयान दिए ।
अजय सिंह भन्छन्,‘ हामी जब लखनउमा काम गथ्र्यौं त्यतिबेला हामीलाई यस बारेमा थाहा थियो । उनको पत्नी त होइन तर पत्नी जस्तै थियो व्यवहार, उनी त्यहाँ जान्थे । तर, यस बारेमा कुनै चर्चा हुँदैनथ्यो । एक पटक सुप्रिम कोर्टमा उनलाई एउटा बयान दिन पर्यो कि उनको पहिलो पत्नी छैन भनेर । त्यतिखेर मात्र थाहा भयो, उनको दोस्रो पत्नी पनि छिन र उनीबाट एक छोरा पनि छ भनेर ।’
जिन्नाको ‘हैम’ प्रेम
यसैगरी धेरै कम मान्छेहरुलाई मात्र थाहा छ की पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नको हैम सैंडविचेज खानसँग निकै हिमचिम थियो । उनको असिस्टेंट समेत रहेका र पछि भारतको शिक्षा र विदेशमन्त्री बनेका मोहम्मद करीम चागलाले आफ्नो आत्मकथा‘ रोजेज इन डिसेम्बर’मा लेखेका छन्,‘ जिन्ना बाम्बे म्यूनिसिपल कर्पोरेसनको चुनाव लडिरहेका थिए । म र जिन्ना टाउन हलका थियौं जहाँ एक मतदान केन्द्र हुने गर्दथ्यो । लंच इंटरवलको दौरान जिन्ना पत्नी रुटी एउटा ठूलो गाडीमा एक टिफिन बास्केट लिएर उत्रिइन अनि हलको सिंडी चढ्दै भनिन्, ‘जे’ गेस गर मैले तिम्रो लागि लंचमा के ल्याएको छु ? जिन्नाले भने मलाई के थाहा ! यति सुनेपछि उनले जवाफ दिइन, मैले तिम्रो लागि निकै मिठो हैम स्यान्डविच ल्याएको छु । यो सुन्नेवित्तिकै जिन्नाको होश उड्यो । उनले भने, तिमीले के गरेको ? के तिमी म यो चुनाव हारुँ भन्ने चाहन्छौ ? यस्तो कुरा सुने भने मानिसहरुले मलाई भोट देलान ? रुटी रिसाउँदै फर्किइन ।